Kiristaalo indhaha aan toos ahayn, kiristaalo laser - Dien
Crystals -ka aan tooska ahayn
Cr4 +: kiristaalo YAG
Ku saabsan Dien Tech
Iyada oo ah shirkad tikniyoolajiyadeed oo qalabka dahabka ah, DIEN TECH waxay ku takhasustay cilmi-baarista, naqshadeynta, soo-saarka iyo iibinta taxane ah kiristaalo indhaha aan toos ahayn, kiristaalo leysarka, kiristaalo magneto-optic iyo substrates. Tayo aad u fiican iyo xubno tartan ayaa si ba'an loogu dabaqay faylka sayniska, quruxda iyo suuqyada warshadaha. Iibintayada aadka u go'an iyo kooxaha injineernimada khibrada leh ayaa si adag uga go'an inay la shaqeeyaan macaamiisha ka socda quruxda iyo warshadaha la xareeyay iyo sidoo kale bulshada cilmi -baarista adduunka oo dhan si ay ugu adkaadaan codsiyada la habeeyay.
Awoodda sare iyo tiknoolijiyadda tamarta sare ee laser iyo seminaarka arjiga
Awoodda sare iyo tikniyoolajiyadda tamarta sare iyo seminaarka dalabka Sebtember 26th-28th, 2021 Laser awood sare leh oo ku saleysan awooddeeda iyo saamaynta tamarta, ayaa wax badan ku soo kordhisay horumarinta fiisikiska, sayniska maadiga ah, sayniska nolosha, ku-tiirsanaanta tamarta. A ...
CIOP Shir sanadle ah oo leh mowduucyo dhammaystiran oo ku saabsan optics iyo photonics, ayaa lagu bilaabay 2008 by Chinese Laser Press, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Akademiyada Shiinaha ee Sayniska. ...
AgGaS2 crystal 39 °/45 ° dalabka aadka u sarreeya ee dahaadhka baaxadda leh
AgGaS2 crystal 39 °/45 ° dalabka aadka u sarreeya ee dahaadhka baaxadda leh ee dahaarka leh ayaa si guul leh loogu dabaqay AgGaS2 crystal 8*8*10mm dahaadhka AgGaS2 oo aan duubnayn 8*8*1mm coa ...